२१औँ शताब्दीको कूटनीतिक ब्रेक थ्रु - Naya Patrika
२१औँ शताब्दीको कूटनीतिक ब्रेक थ्रु
अन्ततः दशकौँदेखि विश्वबाट एक्लिएको उत्तर कोरियाले विश्वमञ्चमा आफूलाई स्थापित गरेको छ । जोगीको राज्यको उपमा पाएको प्योङयाङ केही महिनासम्म आफैँमा रहस्यमय थियो । उत्तर कोरियाको झन्डा एसियाको कुनै क्षेत्रमा फहराएको दृश्य बिरलै देखिन्थ्यो । तर, अहिले जताततै उत्तर कोरिया र त्यहाँका नेताको चर्चा छ ।
किम वंशका पछिल्ला पुस्ता किम जोङ उनले छोटो समयमा नै ‘विश्वनेता’ को हैसियत पाएका छन् र त्यसलाई अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पसँगको शिखर वार्ताले सम्भव तुल्याएको छ । वर्षौंदेखि एक–अर्कालाई सिध्याउने खेलमा रहेका अमेरिका र उत्तर कोरिया सुमधुर सम्बन्धको दिशातर्फ अगाडि बढेका छन् । यसलाई विज्ञहरूले २१औँ शताब्दीको महान् कूटनीतिक ब्रेक थ्रु भनेका छन् ।
वार्ताको पूर्वसन्ध्यामा सिंगापुरको पर्यटकीय क्षेत्रको भ्रमणले किमलाई विश्वकै सेलेब्रिटी नेताको झल्को दिन्थ्यो । उत्तेजित भिडलाई हात हल्लाउँदै सिंगापुरका विदेशमन्त्रीसँग सेल्फी लिएका थिए । यसअघि किम चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङसँगको छलफलमा पनि त्यस्तै हाउभाउमा प्रस्तुत भएका थिए । उनले निकट भविष्यमा रसियाका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनसँग गर्ने भेटले किमको राजनेता बन्ने यात्रालाई अझै सुरक्षित बनाउनेछ ।
शिखर वार्ताले के अर्थ राख्छ ?
ऐतिहासिक भेटवार्ताले तत्कालका लागि उत्तर कोरियालाई फाइदा पुगेको छ । तथापि, यसले दीर्घकालीन रूपमा दुवै देशलाई असर पार्न सक्नेछ । किमका लागि अमेरिकी नेतासँग वार्ताको टेबलमा सहभागी हुनु आफैँमा ठूलो विजय थियो । किनकि, न त किमका बाबुले बहालवाला अमेरिकी राष्ट्रपतिसँग भेटवार्ता गरेका थिए, न हजुरबुबाले नै । अमेरिकासँगको भेटवार्ता उत्तर कोरियाका लागि एक प्रकारको पुरस्कारको रूपमा हेरिएको थियो ।
मंगलबार ट्रम्पसँगको भेटवार्तापछि उत्तरले सो पुरस्कार जितेको छ–बर्बर तानाशाह र स्वेच्छाचारी उत्तर कोरियाली शासनलाई केही हदसम्म वैधता मिलेको छ । उत्तरका आणविक गतिविधिका कारण अमेरिकी दबाबमा राष्ट्रसंघले उत्तरमाथि शृंखलाबद्ध प्रतिबन्ध मात्र लागेको थिएन, ट्रम्पले कुनै पनि वेला प्योङयाङलाई ध्वस्त बनाइदिने चेतावनी दिएका थिए । राष्ट्रपति भएदेखि नै उत्तर कोरियालाई निःशस्त्र बनाउने घोषणा गरेका ट्रम्पका लागि वार्ता सतही रूपमा फलदायी भएको छ ।
ट्रम्प र किममय बन्यो सिंगापुर
वार्तापछि सिंगापुर ट्रम्प र किममय बनेको छ । शिखर वार्ताले सिंगापुरको विश्वभर प्रचार भएको छ । ट्रम्प र किमको भेटले सिंगापुरको अर्थ व्यवस्थालाई सुनौलो मौका दिएको छ । देशभर ट्रम्प–किमको नाममा बर्गर र टिसर्ट होटेल तथा बजारमा देखिएको थियो । होटेलमा खाने सामग्री र कपडामा पनि ट्रम्प र किम छाएका छन् । स्टार होटेल र रिसोर्टले ट्रम्प र किमका बर्गर तयार पार्दै समसामयिक समस्यालाई समाधान गर्न अपिल गरेका थिए ।
केही कम्पनीले विश्व शान्तिका लागि बर्गर तयार पारेका थिए । बर्गरमा अमेरिका र उत्तर कोरियाका सामग्री मिसाइएको थियो । देशभर ट्रम्प–किमको तस्बिरमा टिसर्ट, भाडा र खाद्य सामग्रीको उलेख्य बिक्री भइरहेको छ । शिखर वार्ताबारे समाचार संकलन गर्न एक सातादेखि विश्वका झन्डै चार हजार पत्रकार सिंगापुरमा छन् । उनीहरूले लाखौँ डलर खर्च गरेको अनुमान गरिएको छ ।
जो वार्तापछि भावुक बने
ट्रम्प र किमबीचको वार्ता अमेरिकी पूर्व बास्केटबल स्टार डेनिस रोडम्यानका लागि अहिलेसम्मकै सुन्दर क्षण थियो । डेनिस किमका साथीसमेत हुन् । वार्ताको खबरपछि रातारात सिंगापुर पुगेका उनी वार्तापछि निकै भावुक देखिए । मंगलबारको ऐतिहासिक वार्ताले आफू निकै हर्षित भएको बताए । उनले भने, ‘यो महान् दिन हो । यस दिनको प्रत्यक्ष अनुभूति गर्न म सिंगापुर आएको हुँ । म निकै खुसी छु ।’ स्मरण होस्, किम डेनिसका फ्यान हुन् । डेनिस उत्तर कोरिया जाँदा किम र उनको परिवारलाई भेट गर्छन् । यसअघि दुई नेताबीचको वार्तामा बास्केटबल कूटनीतिको सम्भावना औँल्याइएको थियो ।
कसरी सुरु भयो ऐतिहासिक क्षण ?
गाढा कालो सुटमा सजिएका किम मंगलबार वार्तास्थलमा ट्रम्पभन्दा पहिला पुगेका थिए । एउटा हातमा चस्मा र अर्को हातमा कालो ब्याग समाउँदै उनी कडा सुरक्षाबीच गाडीबाट झरेका थिए । केही सकेन्डमै साबिकझैँ रातो टाई र अमेरिकी झन्डा अंकित निलो कोटमा ट्रम्प वार्तास्थल पुगेका थिए । लगत्तै दुवैजनाले होटेलको दुई दिशाबाट एक–अर्कालाई भेट्न अगाडि बढेर हात मिलाएका थिए । हात मिलाएपछि दुवैजनाले मिलनसार ढंगले एक–अर्काको पाखुरा समाएका थिए ।
पहिलो चरणमा हात मिलाएपछि ट्रम्पले किमको दायाँ कुममा धाप मारेर बैठक कोठातर्फ लगेका थिए । उनीहरूबीच प्रशस्त बडी ल्यांग्वेज पनि देखिन्थ्यो । बैठक कोठामा पुग्नुअघि उनीहरू करिडोरमा संक्षेपमा गफिएका थिए । आडमा एक–एकजना दोभासेबीच उभिएका उनीहरूले पुनः हात मिलाएका थिए । पहिलो बैठकका लागि बैठक कोठामा पुग्नुअघि ट्रम्पले किमको काँधमा बारम्बार धाप मारेका थिए । पहिलो चरणमा हात मिलाएपछि राष्ट्रपति ट्रम्पले वार्ता सफल हुने आशा व्यक्त गरेका थिए ।
ट्रम्पले आफूहरूका अगाडि डरलाग्दो सम्बन्ध रहेको बताएका थिए । जवाफमा किमले कैयौँ बाधा चिर्दै शिखर वार्ता सम्भव भएको बताएका थिए । ‘यहाँ आउन त्यति सहज थिएन । विभिन्न बाधा अवरोध थिए, तर ती व्यवधान पन्छाएर हामी यहाँ आएका छौँ,’ किमले भने । किमको जवाफ सुनेपछि ट्रम्प बुढीऔँला ठड्याएर मुस्कुराएका थिए ।
शिखर वार्ताका चार क्षण
सिंगापुरको होटेल क्यापेलामा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र उत्तर कोरियाली नेता किम जोङ उनले हात मिलाएको क्षण आफैँमा ऐतिहासिक थियो । ‘तपाईंलाई भेट्न पाउँदा खुसी लाग्यो राष्ट्रपति महोदय,’ किमले भनेका थिए । जवाफमा वार्तामा सहभागी हुँदा गौरवान्वित भएको ट्रम्पले बताएका थिए । पुराना व्यवहार र पूर्वाग्रहले हाम्रा आँखा र कान ढाकेको छ । तर, ती सबैलाई जितेर हामी यहाँ आउन सफल भएका छौँ,’ किमले भनेका थिए
ट्रम्पसँग पहिलोपटक हात मिलाएदेखि दुई चरणका वार्ता, लन्च र अन्तिम समयसम्म किमको मुहार हँसिलो देखिन्थ्यो । उनमा कुनै पश्चाताप देखिँदैनथ्यो । वार्ता सुरु गर्नुअघि दुईजना तस्बिरका लागि पोज दिँदा किम खुलेर हाँसेका थिए ।
तर, ट्रम्प बिल्कुलै फरक देखिएका थिए । जानकारहरूका अनुसार प्रायः बैठकमा ट्रम्प आक्रामक रूपमा प्रस्तुत हुन्छन् । किमसँगको भेटमा उनी स्वाभाविक गम्भीर मुद्रामा देखिए । विश्वका तानाशाहसँग तस्बिर खिच्दा मुस्कान देखिन्नथ्यो ।
आलोचकहरूका अनुसार ४५ मिनेट लामो वान टु वान बैठक कामभन्दा पनि देखाउने खालको थियो । ४५ मिनेट आफैँमा छोटो होइन, तर दुवै नेता दोभासेमार्फत बोलेका थिए । यसको अर्थ वास्तविक वार्ता त्यसको आधा अर्थात् २२ मिनेट मात्र भएको थियो ।
ट्रम्प र किमबीचको प्रारम्भिक भेटदेखि अन्त्यसम्मको क्षण भावनात्मक देखिन्थ्यो । हात मिलाउनेबित्तिकै ट्रम्पले किमको माथिल्लो पाखुरामा धाप मारेका थिए । दुवै नेता सुरुदेखि नै विनम्रतापूर्वक प्रस्तुत भएका थिए ।